Ciidamada Ahlu sunna oo baneeyeen Xarunta Dowladda Hoose ee Degmada Dhuusamareeb – Walaal24 Newss
Ciidamada Ahlu sunna oo baneeyeen Xarunta Dowladda Hoose ee Degmada Dhuusamareeb
November 3, 2019	Off	By walaal24
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Ahlusunna ay bilaabeen dhaq dhaqaaqyo ay uga baxayaan Magaaladaas.
Wararka inta badan waxaa ay sheegayaan in saakay Ciidamada Ahlusunna ay baneeyeen Xarunta.Dowladda Hoose Ee Degmada Dhuusamareeb,isla markaan ay la wareegeen Ciidamo katirsan kuwa Dowladda soomaaliya.
Ciidamada Dowladda ayaa waxaa sidoo kale ay xireen dhamaan wadooyinka soo gala Magaalada Dhuusamareeb, waxana hoggaanka Sare ee Ahlusunna ay xilligaan ku sugan yihiin Xarunta Inji ee Magaalada dhuusamareeb.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo qeybaah Bulshada kula hadlayay Guriceel ayaa sheegay in waxa ay hadda arkayaan aysan aheyn waxyaabihii ay kula heshiiyeen, isla markaana ay yihiin dib u noqosho.
Wasiirka Arrimaha dibadda Dalka Turkiga oo ku baaqaay in Soomaaliya la caawiyo
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay Madax ka socotay Bangiga Adduunka
Sawiro: Ciidanka Booliska Soomaliyed oo lagu wareejiyey gaadiidka ay ku xiran yihiin qalabka ka hortaga qaraxyada
Shir looga hadlayay Qorshaha amniga qaranka iyo la dagaalanka Xagjirnimada oo Muqdisho lagu qabtay
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka oo furay kulanka wada-tashiga aas-aaska Machadka tababarka Garsoorka
Dhageyso: Guddoomiyaha Gobalka Banaadir oo ka hadlay sababihii loo xiray wadooyinka qaar ee Muqdisho
Dhageyso: Ciidamada Amaanka magaalada Baardheere oo toogtay Haweeney
Dhageyso: Jan. Bariise oo sheegay in ay haatan socoto baarista dembiyo ku saabsan musuq iyo wax is daba marin
Dhageyso: Golaha Aqalka sare oo Ansixiyay Hindise-sharciyeedka Dhismaha Hay’adda Golaha Naafada Qaranka
Dhageyso: Jawaari “xil heyntii golaha shacabka Berito oo Arbaco ah inaan xilkaasi iyo amaanadaasi aan ku celiyo golaha shacabka oo ii dhiibtay”.
Daawo: Madaxweyne Farmaaj oo xariga ka jaray goobaha Taariikhiga ah oo dib loo soo celiyay
Daawo: Ra’iisul wasaare Khayre oo kula hadalya kumanaan Dadweyne Garoonka kubbadda Cagta ee Dr. Ayuub ee Beydhabo
Daawo: Shariif Xasan oo ka hadlay Shirkii Garoowe iyo musharaxiinta doorashada lagu wado ee Koonfur Galbeed ee hogaamiyo
Daawo: Wasiir Sabriye oo Cadeeyay In dowladu aysan Jebin qodob ka mid ah heshiiskii ay la gashay Ahlu sunna